१० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भए के गर्ने ? सरकारको ‘प्लान’मै उल्लेख छैन
सन् १९१८ बाट शुरू भएको स्पेनिश फ्लूले विश्वभरि करीब ५ करोडभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । १९१८ को मेबाट उक्त फ्लूले मान्छेको ज्यान लिन शुरू गर्‍यो । बेलायतको रोयल सोसाइटी अफ मेडिसिनले जुलाईमै सर्वसाधारणहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन र भिडभाड भएका स्थानमा नजान भन्दै ‘सार्वजनिक प्रयोगका लागि लेखेको ज्ञापन पत्र’ तत्कालीन बेलायती सरकारले नै बेवास्ता गरेको थियो ।
त्यतिबेला संसार पहिलो विश्वयुद्धमा होमिइसकेको थियो । शुरू भएको केही महिनामै विश्वभर फैलिनुमा सैन्य टुकडीहरूको भूमिका रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले जस्तो त्यतिबेला राज्यस्तरबाटै ‘लकडाउन’को पालना गरेको भए धेरैको ज्यान जोगिन सक्ने स्थिति रहेको रोयल सोसाइटी अफ मेडिसिनको प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै बीबीसीले प्रकाशित गरेको एक समाचार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यतिबेला अहिलेजस्तो इन्फ्लुएन्जाको खोप या अन्य कुनै पनि प्रकारको औषधि बनिसकेको थिएन । तर पनि उक्त फ्लूको लक्षण र मृत्युदरको आंकलन गरेर केही ‘प्रिभेन्टिभ’ मेजरहरू अपनाइएका थिए । संसारभर धार्मिक अन्धविश्वास उच्च रहेकाले त्यतिबेला फ्लूलाई सैतानले मानिसलाई दिएको सजायका रूपमा लिने गरिन्थ्यो ।
अहिलेको परिस्थिति पनि उस्तै !
अहिले परिस्थिति केही फेरिएको छ तर धेरैजसो स्वास्थ्यविज्ञहरूले त्यतिबेलाको फ्लू र अहिलेको कोभिड– १९ को लक्षण एउटै भएको बताउने गरेका छन् । यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म विश्वभर ४७ लाखभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने ३ लाख १३ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
नेपालमा संक्रमितको संख्या हालसम्म २ सय ९१ पुगेको छ । जनसंख्याको हिसाबले यो संख्या थोरै हो । छिमेकी देश भारतमा संक्रमितहरूको संख्या लाखको हाराहारी पुग्दा पनि खुला सिमाना भएको नेपालको यो संख्या निकै थोरै जस्तो देखिन्छ । यसको दुईवटा कारणहरूबारे आम चर्चा गरिन्छ ।
पहिलो नेपालमा परीक्षण नै नभएर संक्रमितको संख्या थोरै देखिएको हो । दोस्रो कारणका रूपमा नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर धेरै भएकाले संक्रमितको संख्या कम देखिएको हो । कतिपय स्वास्थ्य विज्ञहरूले नेपालमा परीक्षण नभएर संक्रमितको संख्या कम देखिएको तथ्यमाथि जोड दिएका छन् ।
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा शुक्रवार एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो । मृत्युपछि गरिएको परीक्षणमा उनमा कोभिड– १९ को संक्रमण देखियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ती महिलाको मृत्यु कोभिड– १९ का कारण मृत्यु भएको गरिसकेको छ । कोभिड– १९ संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि अहिले देशभरि नै त्रासको वातावरण बनिरहेको छ ।
त्यतिबेला नेपालमा पनि परेको थियो असर
१९१८ घातक फ्लू देखिएको धेरै पछिसम्म कतिपय देशहरूले सामान्य रोग भएको भन्दै बेवास्ता गरेका थिए । त्यतिबेला संसारभर स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव थियो । अस्पतालहरूमा लडाईंका घाइतेहरूबाहेक अरू जाँदैनथे । भारतमा प्रकाशित भएका विभिन्न हेल्थ जर्नलहरूले १ करोड ४० लाख देखि १ करोड ७० लाखसम्म भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको अनुमान गरेका छन् । नेपालमा त्यसले कति क्षति पुर्‍यायो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि भारत फर्कने सैनिकबाट भारतमा फ्लू फैलिएको थियो । निश्चितरूपमा ती सैनिकहरूमध्ये धेरै गोर्खा सैनिक पनि थिए । भारतमै करोडौंको ज्यान लिएको फ्लूले नेपालमा केही हजार या बढीमा लाखकै आंकडामा ज्यान लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
इतिहासबाट सिक्न चाहेन सरकारले
नेपाली राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारले पहिलो संक्रमण देखिएपछिको ४ महिनासम्म कानमा तेल हालेर सुतेको छ । अझै पनि अस्पतालमा बेडको संख्या बढाइएको छैन । स्वासप्रस्वास सम्बन्धी गम्भीर लक्षण देखा पर्न सक्ने सम्भावित संक्रमितहरूका लागि भेन्टिलेटरको उचित व्यवस्था गरिएको छैन । निजी अस्पतालसँग सरकारले कुनै समन्वय गरेको छैन । सरकार अनुदानमा आएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई ‘सफलता’का प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
बिडम्बना के छ भने शुक्रवार सरकारले संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सफलताकै कारणले कसैको ज्यान नगएको उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट कोभिड– १९ का कारण एक सुत्केरीले ज्यान गुमाइन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि सरकार चलाउनेहरूको असली हैसियत प्रकट भएको छ ।
उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसअघि कसैको मृत्यु नहुनुलाई सरकारको सफलताका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिए । एकाध दिनमै सरकारको सफलताको रहस्य निर्मम ढंगले उजागर भएको छ ।
देशभर दर्जन भन्दा बढी प्रयोगशालामा पीसीआर (पोलिमरेज चेन रियाक्सन) विधिबाट परीक्षण हुने गरेकोमा कतिपय परीक्षण विश्वसनीय देखिएका छैनन् । कतिपय प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने सामग्रीको अभावमा छन् ।
सरकारसँग नीति नै छैन !
वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले अन्य देशमा संक्रमणको दर घट्दै जाने तर नेपालमा बढ्दै जाने स्थिति राम्रो नभएको बताए । ‘सरकारसँग कुनै योजना छैन, कुनै नीति छैन र कुनै तथ्यांक विश्लेषण छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर गयो भने यसको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई जान्छ ।’
उनले आजैको मितिबाट सीमा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘उताबाट नेपाल आउन कुरिरहेका नेपालीहरूलाई केही दिन पर्ख भन्नुपर्‍यो, त्यो समय चाहिँ तयारीमा लगाउनुपर्‍यो । डब्लुएचओको मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्‍यान्वयन गरेर लाखौंलाई राख्न सक्ने क्वारेन्टाइन बनाएरमात्र उताबाट नेपालीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
त्यसका लागि तत्काल तयारी थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'यता क्वारेन्टाइन रेडी गरेपछि सरकारले भारतबाट आउने प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्क्रीनिङ गर्दै सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्छ,' उनले भने ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूले पनि केन्द्रसँग समन्वय गरेर आ-आफ्नो क्षेत्रमा नियन्त्रण र निगरानी बढाउनुपर्ने उनले बताए । उनले जहाँबाट जसरी भएपनि परीक्षण गर्ने सामग्री जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘मागेर हुन्छ कि किनेर हुन्छ कि जे गरेर भएपनि परीक्षण गर्ने किटहरू ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दिनको एक लाख टेस्ट गर्ने क्षमता सरकारले केही दिनमै बनाउनुपर्छ । अन्यथा महामारीको चपेटामा पुरै देश आउन सक्छ ।’
के छ सरकारको ‘प्लान’मा ?
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’मा देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा जम्मा बेडको संख्या २६ हजार ९ सय ३० रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
१५ सय ९५ आइसीयु बेड छन् भने जम्मा ८ सय ४० भेन्टिलेटरको संख्या रहेको छ ।
पछिल्लो केही दिनमा नेपालमा कोभिड– १९ संक्रमितको संख्या केही दिनमै दोब्बर हुने अनुपातमा बढिरहेको छ । यदि यही अनुपातमा संक्रमण बढ्यो भने केही सातामा नै नेपालका सबै अस्पतालहरू भरिने र संक्रमितहरूलाई राख्ने ठाउँ नहुने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।
सरकारले आफ्नो ‘प्लान’मा १० हजार भन्दा बढी संक्रमित भए के गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छैन । २ हजार संक्रमित भए कम्तीमा १६ सयलाई आइसोलेसनमा राखेर सामान्य उपचार गर्न सकिने, ३ सयलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने हुनसक्ने र १ सय जनालाई आइसीयूमै लैजानुपर्ने हुनसक्ने सरकारको अनुमान छ ।
सरकारले आफ्नो ‘प्लान’मा यदि संक्रमितको संख्या १० हजार भए ८ हजारलाई सामान्य उपचार, १५ सयलाई अस्पताल भर्ना र ५ सयलाई आइसीयूमा राख्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
१० हजार भन्दा बढी संक्रमितको संख्या भए के हुने ? सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन ।
प्रत्येक प्रदेशमा २ हजार शय्या, महानगरपालिकामा २ हजार शय्या, उपमहानगरपालिकामा १ हजार शय्या, नगरपालिकामा ५ सय देखि १ हजारसम्म, गाउँपालिकामा ५ सयसम्म र काठमाडौँ उपत्याकामा रहेका ३ जिल्लामा ५ हजार शय्याको अस्पताल बनाउने भनेर गत चैत १० गते निर्णय गरेको भएपनि काम भने अझैसम्म शुरू भएको छैन ।